Xisaab Ahaan..Imisa Ayuu Qaadan Karaa Dagaalka Al-Shabaab iyo Mareykanka | Xaqiiqonews
Xisaab Ahaan..Imisa Ayuu Qaadan Karaa Dagaalka Al-Shabaab iyo Mareykanka
Hadii Mareykanka uu ku sii dhaganaado caqliga uu hadda isticmaalo ee duqeynta lagu dilaayo “labo am hal jihaadiyiinta ka mid ah” waxa ay ku qaadan doontaa 13 sano in la soo afjaro dagaalka Alshabaab.
“Dagaalkani waa dagaal geed qaad oo kale ah” ayuu yiri wasiirka difaaca Mareykanka Mark Esper , mar su’aal laga weydiiyey duqeymaha uu Mareykanka ka fuliyo Soomaaliya iyo Liibiya,.
“Taasi macnaheedu wax waaye waa in aad sameeysaa ficiladan oo kale ka waqti ka waqti” ayuu sii raaciyey.
Dagaalyahanada kooxda Alshabaab ee hadda shaqeysa ayaa lagu qiyaasaa inta u dhaxeysa 5,000 ilaa 9,000 oo dagaal yahan, hadii markaa Mareykanka uu sii wado kaliya caqliyadda duqeyn ee lagu dilaayo “labo ama hal jihaadiyiinta ka mid ah” waxa ay Mareykanka ku qaadan doontaa 13 sano in uu soo afjaro dagaalka-sida Xaqiiqonews ay ka soo tarjuntay wargeyska faransiiska ee Le monde.
Wasaaradda Difaaca Mareykanka ayaa duqeymo xagga cirka ah ka fulisa Soomaaliya, kuwaasi oo ka dhan Al-shabaab, hase ahaate hay’adda xaquuqda aadanaha ee Amnesty international ayaa dhawaan soo saartay warbixino ay ku sheegeyso in duqeynta Mareykanka ay ku dhintaan beeraley, caruur iyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan.